“MACALLIN, HAB KA AAD WAX U WADDO MA CADDA.” | Laashin iyo Hal-abuur
“MACALLIN, HAB KA AAD WAX U WADDO MA CADDA.”
Hadalkaas waxaa igu dhahay laba fasal oo ka mida fasalada laba jaamacad. Waan ka fikiray ilaa aan ku sig tay in aan beddelo habka barasho ee aan ku socday, kaas oo ahaa mid ku dhisan hab-barasho buuggayd (Textbook-based learning), laakiin la socday bawarboonti (Powerpoint). Nuxurka cutubka wuxuu ardayga ka helayaa bawarboontiga laakiin wixii faahfaahin ah wuxuu ugu tegayaa buugga. Sidaas darteed, waa in uu akhriyaa, iskuna haleeyaabuugga. Yuusan isku koobin islaadhyada (Slides).
Faa’iidada ugu weyn ee aan ka dhex arkay habkaas waa in ardayga lagu dhiirriggeliyo abuurista dhaqan akhris (reading culture).
Isbuucii afaraad aniga oo ka soo baxay fasal ka mida fasaladii ka cabanaayay habka aan wax u waday ayaa waxaan ku dul kufay maqaal uu qoray Paul Ralph. Maqaalkaas waxaan ku dhex arkay hadalkan: “Macallinka wanaagsan ee ardayda u bandhiga casharo maanxujays ah [ee ardayga ku qasba in uu wax badan akhriyo] waxaa lagu dhaliilaa habka uu wax u wado.” Tani waxay igu beertay kalsooni, balse ma hilmaamin cabashadii ardayda. Ugu yaraan waxaan ku dadaalay in aan meel dhexe isugu imaano, aniga oo aan ka oggolaan codsiga ah macallin naga dhaaf buugga, keli nuxurka (Main points) noogu soo koob bawarboonti, weyddimaha imtixaankana halkaas inooga keen.
Wuxuu kaloo qoraaga maqaalka tilmaamay in jaamacadaha laftirkooda ay qayb ka yihiin dhibka, wuxuu yiri “Jaamacadaha waxay ardayga ku qiimeeyaan qanacsanaantiisa laakiin xoogga ma saaraan waxa uu baranayo.”
Ardayga oo aan akhrin buuggaagta laakiin isku haleeya keli qodobada ku qoran islaadhyada. Wuxuu hoos u dhigaa xis-naqdineedka (Critical thinking), lafogurid-tabeedka (analytical skill) iyo fahamka ardayga. Wuxuu ardayga ka dhigaa maankucaajisle isku haysta in uu wax bartay. Wuxuu hilmaamsiiyaa waajibaadka ardaynimo, waana tan keentay in hankiisa waxbarasho uu yaraado, isaga oo halhays ka dhigta ‘imtixaanka un ku baas.’
Inta kor ku xusan iyo in ka badan waxay caqabad ku yihiin horumarinta dhaqan akhris, xis-naqdineedka ardayga, fahan qotodheer, iyo tayadiisa waxbarasho.